nepjournal.com Matiudi oo si rasmi ah ugu biiray juventus - Nepjournal: Garissa County news, Wajir County news, Mandera County news, Kenya news, Somalia news, World news
kooxda kubada cagta ee juventus ayaa sheegtay in heshiis ay la gaareen ciyaartoyga kooxda PSG ee Blaise Matuidi.
Juventus ayaa kula wareegtay xidigan aduun gaaraya 20 milyan oo euro ah, wuxuuna qalinka ku duugaya heshiis saddex sano ah.
Xidigan u ciyaara qaranka France ayaa maanta ka dagay magaalada torino halkaas oo looga qaadi doono tijaabo caafimaad.
Arintan ayaa ku soo aadaysa xili macalinka juventus Massimo Allegri uu suuqa kala iibsiga ciyaartoyda aad uga doon doondoonaya xidig qad dhexe ah.
waa xiddigii lixaad ee kooxda Juventus soo iibsadaan xili ciyaareedkan ayaagoo horey ula soo wareegay xiddigyada kala ah Rodrigo Bentancur,Douglas Costa, Wojciech Szczesny, Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi.
Previous : Jubilee’s Bunow Korane elected Garissa governor as Roba retains Mandera.
Next : Mukhtar robow oo kula taliyay ciidamada u dagaalama kooxda alshabaab inay isaga baxaan